MUUQAAL: Muuse Suudi Yaxalow oo Khudbad la yaab leh u jeediyey Beesha uu kasoo Jeedo (Daawo) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Muuse Suudi Yaxalow oo Khudbad la yaab leh u jeediyey Beesha uu kasoo Jeedo (Daawo)
Oct 16, 2020 - 30 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Muuse Suudi Yalaxow oo kamid ahaa Hogaamiye Kooxeedyaddii dalka, Islamarkaana hada ah Sanatar ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka, ayaa Khudbad u jeediyey Beesha uu kasoo jeedo , Isagoo kula dardaarmay arimo la yaab leh.
“Mudulood Baarlamaam la gama Rabo, Madaxwayne Raba ma Joogo, Raysal wasaare Raba masoo marin, Hadana inay is xoreeyaan Mooyee, Qof wax u Qabanaya oo ma jiro, waxaa la rabaa inay Dhulka ka kacaan “ Ayuu yidhi Yalaxow.
Muuse Suudi Wuxuu dardaaran Adag u jeediyey Hogaamiye Dhaqameed Cusub oo maanta ay ku Caleemo saareen, wuxuuna u sheegay inaan laga aqbali doonin inuu baal maro howsha loo doortay, sidoo kalana aan laga yeeli doonin inuu dantiisa gaarka ah ka shaqeeyo.
Dhinaca kale Muuse Suudi ayaa Beeshiisa kula dardaarmay inay Nacaan, dadka Neceb ee maamulada sida uu hadalka u dhigay.
“Maamul Goboleedyadda dalka iyo dadkeeda kuwii idin Neceb, sida ay idiin naceen idinkuna u Naca, Qofkii Quudhsada, waa la Quudhsadaa, Sidoo kale waxaa la idin nacay Ciidanka Booliska, Milatariga, Nabad sugida, Asluubta, Waxaana la idinku nacay Baari nimada, Waxaana hada la marayaa in la idinka reebo Tababarka”. Ayuu yidhi Muuse Suudi.
Waar mooryaankan waa hadhaagii warlords criminals Soomaaliya soo maray oo aan weligiisa garan macnaha dowladnimo iyo qarannimo. Bal nacasnimada iyo caqli xumadiisa eega.
Daanyeerkan iwm waxay ahayd haddii dowlad dhab ah jirto isaga iyo mooryaanta kale ee Somalia oo dhan mar hore in laga takhalluso .
Badownimadiisa waxaa ka daran diin xumadiisa.
Ma wuxuu rabaa in beeshiisa yidhaahdo sida Iidoorku waxaannu nahay qaran deetana meel cidla ah ku soo dhacaan.
Adoo cagdheer ah maba aha inaad dad wax Ka sheegtid
Isaaqu ma beri may wax kugu sameeyeen ileen waa adigan nagu khafiifaye
Hadaadan qorin isaaq cagdheereey miyaad xanuusanayaa
Timirtii horeba dab loowa berigaad yidhaahdeen Ka sheekee
Muuse WAA hoggaamiye kooxeed, MANA garakaro Qiimaha uu ku fadhiyo Mudulood.≈©≈Muusow, Mudulood WAA lafdhabarka Hawiye, WAA hayyinka Somali ku guurto, waa Reer dulqaad badan, Wuxuu ka tirsanyahay Beelaha Somali kuwa ugu farahabadan, ADNA waxaad rabtaa inuu la tirsado Beesha Baajuun oo ah Besha ugu yar Qabiilada Somali. ≈©≈Muusow ku ekaaw INAAD ka hadasho Waxaad Garasho u leedahay. ≈©≈Muusow, Mudulood ma aha Rati buubaala EE waa tiirka ummadda Somali, aragtidiisuna waa inay noqoto Mid Somali oo dhan xambaarsan. WBT
Hawiyihii reer magaalka ahaa ha la goobo, dadkan miyigii ha lagu celiyo…
Kaahin, wuxu wax lagumaysato saw maaha. Ciqaabta haysata bal eeg. Madaw kuwii ugu xumaa ayaa gumaysta (xabashi iyo kukuuyo) markaasuu daduu kudulnoolyahay caayayaa. Markaa maqasho kelmeda inangumeed miyaanu kanoo kale qalbigaaga kusoo dhacayn. Ninkaa ina caayayaa hargeisa kama baxo. Xitaa xamar mategi karo.
golaha ku soo dhowow. Midna ii sax magaca Kader ma Soomaali baa mase adigaa higgaadda khalday.
Yaa ina gumeed ah? Ma Suldaanka mase dadka ay u taliyaan gaala madowga iyo caddaanka Xalane, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hiiraan iwm?
Read my record from this medium intaadan deg degin.
Midda kale halkeed leedahay oo lagu dul nool yahay?
Ma Muqdisho mase meel kale?
Adeer xumida jooji ee wax baro?
Ugu dambayn xamar iyo Hargaysa waa iskumidee ha ha dalanbaabin.
Waan soo dhawayneynaa imaamka beelaha mudulood.
Waa imaam 104 ee beesha mudulood.
Soo dhawoow imaam.
Alxaaji muuse suudi yalaxoow waa ku mahadsan yahay hadalka runta ah ee uu meesha ka jeediyay.
Dadka xanuunsan alla hacaafiyo.
Xaajigu hadal xun ma dhihin.
Beeshu waa in ay kala garataa cadowgooda iyo saaxibkooda.
Mooryaan Yalaxow intuu dad Abgaal, Sheekhal cawaantiisa madaxa musbaar uga kaawiyeen ama maato Habargidir dilay waaloo cafiyey.
Waa dal dadkii maxkamad la saari lahaa weli bootaynayaan ayagoo qabiil ku awr kacsanana.
Hala heshiiyo ama hala cafiyo ma xuma laakiin Somalia waa dalka keliya oo weli dilaagii agoontii aabahood dilay madax u yahay…yaab.🙀
LOP Saaxiib, maad iska daysid qabyaaladaan AAN macnaha lahayn, REERKIINUBA kama Xalnayn Xayawaanimadi Somaliya ka dhacayse!!!. WBT
Socoto waa dhibtaa Maxaad ku leedahey Xoolahaan.
Waxaa isukay qaban waayey ogaadeen isaaq badawnimo kaa caayaya
Berigaynu asturaynay ay Ku baxday timirtii horeba dab loowaa
Imaam dabshid waan ku salamay.
Dadkaan socotadaa warkooda meel iga dhig kow dheh.
Imaam daahir waa la duubay.
Madaxweyne cali Mahdi iyo xaaji muuse waan arkay.
Laakiin ugaas maxamuud cali ugaas iyo ku simihii imaamka meesha ugama jeedin.
Maxaa qaldan masa sheekadu waa qaseey labaneey?
Salaan sare eebow
Qaadum diidan inow u qidmeeyo Iimaam Daahir waan gartee, Ugaaskii Abgaal meel ku sheeg.
– Eebow nin maqnaa iyo Nin Joogeyba Iimaam Daahir Waa IIMAAM HIRAAB,
Dalkuna Doorashow rabaa,
Qurbo joogna sagootiney rabtaa.
Nimaan Ciid/dhul kugu darsan
Nimaan Canshuur kugu darsan
Nimaan Ciidan kugu darsan
– Soo maahan Ninkii Dhulka loogu yimid oo maslaxey JAMBALLE ENO3 SAARAN.
– Xamar waa nin ka xamaasho iyo nin u xamaalo.
* Ina Timid yuu idiin Talin
Docotadu waxay dabasoctaa
, dadkii la soo doortay iyo dadka cadaanka ah iyo lacagta dunida
Lacagta xamar ka soo baxdaa in leeg meel kasta waa taalaa
Cary ya baarlamaanka iyo wasiirada iyo safaaradaha garoowe noo geeye
Dib noo arki maysid sidii 1991-2005
Mar hada ii Cassinasco iyo dowlad la sheegi anaa lay sheegay waa waxaygii
Muse saas uma fahamsana
Mar hada ii Caasimad iyo dowlad la sheego anaa lay sheegay , waa waxaygii
Yaa ila arkay kalmada waa badow waa badow buu ku qarwaa ilahbaan idinku dheershee waqooyi iyo koonfurba badow marka la yiraah ogaadeen bay xasuusanayaan ila eega Ali zero marwalba uu wax qoro was badow baa ku jirta
Magan iyo cayayaanka sidiisoo kale ah.
Haddaydaan doodi aqoonin nacnacda meesha kala taga, haddaysan muqdisho magaalo madax ahayn
abgaal iyo suudi yalaxow magacooda lama maqleen
waayo 80% waa xoolo! bal mooryaan yaloxow oo ay ahayd inuu xabsiga liinta ku cabbo baa wali dadka soo hor istaagaya, dalkaani ma hagaagayo inta dadka noocan ahi banaanka joogaan. haddaan laysla xisaabtamayn iska daba wareeg laga bixi maayo.
Iidoor iyagaa bac isku xidhay oo meel cidla ah is dhigay, si ay usoo noqdaan bay garan la’ yihiin.
30 sanaan dowlad ahay iyo hargeysa dameerahaa biyaha u dhaamiya, waddooyinkuna waa sidii dowladdii kacaanku kaga tagtay bal isqabadsii ?!?
Runtu dad bay gubtaa!
MO, weli ma aragtay qof kuleh ku doono maayo ood hadana eryaneyso. Adeer idin dooni maynee na daaya. 30 years ayaad naga daba yuusaysaan. Walaahi umad bahdilan ayaad tihiin. Bal qof aad sanka kahaysato oo hadana kaa daba yuusaya. Cajeeb. Adeer xaasid baad tahay. Halkay somaliland marayso adiga cidina waxba kaa weydiin mayso waayo faqashtii laga nadiifiyey iyaga iyo xaarkooda ayaad tahay.
Nin rag ah ayaad tahey inkastood reer Qurac kala mid tahey WAR ANAGU FUUDKA MA RABNO EE CADKAAN RABNAA ( Yacni Canshuurta Xamar ma rabno ee MIISHAARKA PARLIAMENT AYAAN RABNAA).
Eebow Tuulo 2 km Square ah maxey safaarad ka sameyn, Aqoonta kaasho.
Haloo turo @ Ali Zubeer iyo MO waa dad ku cusub Dalalkii xoroobey 1960, iyo Kaftanka golayaasha Xortaa.
30 sano waxaad tacban weyday waligaa tacban deysid.
* Aqli GAAWEETO iga dheh
Kader Meeshan waxaa soo gala agoontii kacaankii saqiiray ee qarnigii labaatanaad . Those who are suffering from what I called Somaliland syndrome disease are people who live in the past are generally afraid to compete in the present, Somaliland is here to stay put that in your stupid head Timirtii horeba dab loo waa ..is ogaa wuxuu yahay
Ku caayi maayee golaha ku soo dhowow.
Badownimada waa mid ay Iidoorku iyo Soomaali badankeeda including Daroodka iyo Hawiya ceebteeda wada qabaan marka qarannimo laga hadlayo.
Golahan waa meel lagu soo bandhigo fikrado, wax laysku waydaarsado, laysku saxo iyo ciddii qarannimada Soomaaliya dhaawacahaya yur laga yidhaa.
Lama beeleeyo fikirka iyo aqoon iswaydaarsiga halkan ka socota. Lama caytamo. Midna ogow haddaad ogaadeen caydo weligy ka diiri maayo waayo anigu mustawahaasi iwm waan ka gudbay oo qaran dhab ah baan higsanhayaa.
Marka ha is daalin, hana ku ceeboobin golahan.
haddaan qabiilka caabuddo waar ka joog badow baad tahay baa lagugu loox jiidahaya….kkkkkk
Imam dabshid suldaan garqaad waan idin salaamay
Damiin caqliga Ka aradan baad tahay soo baro macnaha dhabta ah ee dawladnimo
Dawlad Laguma noqdo ok keliya waxaan Ka mid ahay United nation
Macnaha dawlad just to name a few categories of statehood
..more then twenty ministries
..tax collecting agency
Need I say more yaa abuu jaahuluun mo
Kkkk IIDOORKU kalsoonidaa ku yar baan is iri, maxay lawada qayliyaan oo u caaytamaan markuu qof fikirkiisa ka hadlo, war barta sida loo doodo oo qof loogu jawaabo, ama iska aamusa, teeda kale isu daaya hadii labo qof isla hadlaan oo hays daba yaacina.
Qolyaha reer Kalshaale ninkii Kalsame ee awelba maryaha lagu celcelinayey miyaa halkan sawirkii libaaxa u soo dhigteen. Ninkaa wixii ku dhaca idinkaa ka masuula ogaada.
iidoor mid ha ogaadaan, dal la kala jarayaa ma jiro
waligiinba khiyaaliga ku seexiya dumarka iyo carruurta, siyaasiyiinta iidoor way ogyihiin xaqiiqda laakiin waa cowards aan ku dhicin in ay dadka soo hor istaagaan oo runta u sheegaan!!
Waan ku salaamay Suldaan, mise reer Boqor Burco ayaad aheyd
Sxb in wali Koofurtu wada Muranto waa cilad ka timid USC oo dabo martey Wixii loo aas aasey.
Maanta Koofur waxey ahaan laheyd mid sida Waqooyi.